Afeef - Quotes Pedia
Dhammaanteen waxaan u baahan nahay xoogaa dhiirrigelin iyo dhiirrigelin ah si aan uga gudubno nolosheena maalmeed. Niyad wanaag iyo rajo ayaa naga caawisa inaan sugno oo aan sii wadno socodka. Dhiirrigelinta ayaa naga caawisa sidii aan nafteenna u sii riixayn lahayn oo caqabadaha u wajihi lahayn. Waxay kaloo naga caawineysaa inaan dhiirigelino oo aan ula dhaqanno dadka kale ee dhibaatooyin ku haysta noloshooda.
Hab wanaagsan oo aad naftaada ku siiso dhiirigelinta loo baahan yahay ayaa waxaa ka mid ah soo uruurinta weyn ee xigashooyinka iyo xigashooyinka dhabta ah. Soo xigashooyinku waxay si sax ah u gudbiyaan uguna dhawaaqaan xaalad laga yaabo inay cakiran tahay oo ay adag tahay in lala macaamilo. Xitaa markay wax hagaagsan yihiin, xigasho macno leh ayaa ku bari doonta inaad farxaddaada aad u hayso aadna aad ugu mahadnaqto waxaan haysano.
Quotespedia waa goob wanaagsan oo lagu baadi goobo xigashooyinka rafcaan u ah socod kasta oo nolosha ah. Waxay ka kooban tahay xigashooyin dad ah oo ka socda socod kasta oo nolosha ah oo aad ka fikiri karto. Xigashooyinku waxay rafcaan u noqon karaan 14-jir waxayna sidoo kale dhiiri-gelin karaan 65-sano sidoo kale maxaa yeelay dhammaan xigashooyinkaas waa kuwo aan waqti lahayn oo wax ku ool ah.
Websaydhku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad raadiso mowduuc ka dibna wuxuu kuu furayaa tiro badan oo xigashooyin ah oo ka imanaya dadka adduunka oo idil ee mawduuca la xulay. Marka, sii wad baarista, dhiirrigalinta, iyo dhiirrigelinta kuwa kale!
Haddii aad ka hesho xigasho (yaasha) kasta oo aad rabto inaad nuqul ka sameysato ama / ama aad ugu isticmaasho bartaada / websaydhka ama meel kasta oo kale, waxay noqon kartaa tilmaam nooceedu yahay inaad siiso websaydhkan.
Fadlan si taxaddar leh u aqri mas'uuliyada soo socota ka hor intaadan isticmaalin degelkan.
Sidoo kale eeg Quotespedia.org Terms of Service iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Dishoimer Tani waxay xukumi doontaa isticmaalkaaga Quotespedia.org. Adigoo adeegsanaya websaydhkan, waad aqbali kartaa qaanso-qaade si buuxda. Haddii aadan ku raacsaneyn qeyb ka mid ah sheegashadaan, ha isticmaalin Quotespedia.org ama bogag internet ah, guryaha, ama shirkado xiriir la leh. Waxaan xaq u leenahay inaan badalno shuruudahan waqti kasta. Waa inaad, sidaa darteed, mar labaad dib uga eegtaa wixii isbeddelo ah. Adigoo adeegsanaya websaydhka kadib markaan dhajinno wixii isbedel ah, waxaad ogolaatay inaad aqbasho isbedeladaas, bal inaad dib u eegtay iyo in kale.
Sawirada loo adeegsaday Quotespedia.org waxaa laga soo qaatay bogag internet madaxbanaan, asxaab, iyo isticmaaleyaal, waxaana la rumeysan yahay inay ku jiraan "qaybta dadweynaha". Waan soo aruurinnaa, dib ugu celinnaa oo waxaan gelinnaa meelo-meelood. Haddii aad tahay milkiilaha xaqa u leh muuqaal kasta oo aad rabto in lagaa saaro fadlan noo soo dir email waxaanan uga saari doonnaa si taxaddar leh baahida.
Qormooyinka lagu soo bandhigay barta websaydhkan waxaa loogu talagalay oo keliya ujeeddooyin waxbarasho iyo dhiirrigelin waxaana loo heli karaa adeegsiga shaqsiyadeed waana bilaash. Ma jiraan kharashyo qarsoon oo ku lug leh markii la soo dejinayo.